FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA XOLOITZCUINTLI - ALIKA
Ampidiro ny Xoloitzcuintli amin'ny faha-11 volana— 'Ity dia Relic, mitombo ary mihalasa amin'ny alika mahatalanjona indrindra! Nanomboka ny asany fampisehoana izy ary mampihatra ny fankatoavana. Nampahafantarinay azy ny vato misakana tsy dia misy dikany firy hanomanana azy handray anjara amin'ny fanatanjahan-tena! Relic dia manana angovo mandritra ny andro maro! Tsy mijanona izy mandra-pahatongan'ny amin'ny 8 ora alina rehefa toy ny hoe misy olona mamely switch ary mivadika ho bibikely feno hadisoana! '
Ny Xolo dia misy karazany telo: kilalao, bitika, fenitra ary karazany roa: mifono sy tsy misy volo, miaraka amin'ny volon-doha no tadiavina sy be mpitia indrindra. Tena tsy misy volo izy na tsy misy volo fohy amin'ny loha sy rambony. Ny Xolo tsy miakanjo volo dia tsy tokony ho voloina mihitsy, na hanana volo lava, volo tariby na volo mirandrana. Ny hodiny dia tokony ho malefaka sy malama, nefa mafy ho an'ny singa. Ny Xolo dia misy loko isan-karazany, manomboka amin'ny mainty ka hatrany amin'ny vato fisaka, volondavenona, varahina, brindle, mena, zana-kazo, matevina na misy pentina. Ny karazany mifono dia tokony hanana palitao feno fohy, fohy sy malama ary madio, toy ny an'ny Doberman miaraka amin'ny fanosorana matetika izay mandatsaka kely. Ny Xolo mifono dia tsy tokony hanana volo lava, tariby na volo miromotra koa. Izy io dia manana mpanaraka mahatoky an'ireo tia ny karazany nefa aleony palitao amin'ny alikany. Amin'ny salanisa fako dimy , efatra tsy ho volo ary ny iray hosaron-doha. Ity dia karazana matanjaka sy matanjaka tokoa, misy karan-doha malalaka sy orona mainty na miloko hoditra. Ny maso miendrika almond dia maizina na mifanaraka amin'ny lokon'ilay alika. Ny mampiavaka azy indrindra dia ny sofina lehibe sy mahitsy toy ny ramanavy izay tena liana ary afaka mandre sy mampitandrina anao amin'ny loza na olon-tsy fantatra. Manova loko ny Xolos rehefa mihamatotra.
Ny Xolo dia tena marani-tsaina, tsy mivadika, mailaka, atletisma ary be fitiavana amin'ny fianakaviany. Zava-dehibe ny andraikitry ny mpianakavy rehetra amin'ny fitarihana, fitaizana, fampiofanana ary famahanana ny Xolo na hamatotra izany olona na olona manao izany. Fiarovana voajanahary ary tsy mira amin'ny olon-tsy fantatra izy io. Miaraka amin'ny mety mifanerasera tena tsara izany miaraka amin'ny orinasa sy ny ankizy. Angano fa ny Xolos dia mpihinan-kena, na dia izany aza dia tia legioma izy ireo. Mora ity karazana ity lalantsara , ary mianatra haingana be. Tsy maintsy ianao no mpitarika ary ampianaro ny Xolo, raha tsy izany dia hitarika sy hitantana ny trano ho anao. Ity karazana ity dia nanjary malaza be toy ny alika mpankato, amin'ny fitsaboana, ny hakingana ary ny fanajana. Betsaka no mianiana fa mianatra bebe kokoa amin'ny Xolo noho ny karazany hafa, satria marani-tsaina tokoa izy ireo ary mifanaraka amin'ny fianakaviany. Ny Xolo dia matetika antsoina hoe alika Velcro, mijanona amin'ny tompony amin'ny fotoana rehetra, mahalana vao mandositra na mandeha. Ny testamenta iray an'ny tompona dia nilaza fa niantso izy ary niantso ny Xolo azy mba hijery fotsiny ary hahita azy mipetraka eo ambony ary miandrandra toa milaza hoe, 'inty aho.' Ka dia nianatra haingana izy mba hijery ambany fotsiny aloha dia eo izany. Nilaza ny tompona iray hafa fa tia miakatra hazo miaraka amin'ny ankizy i Xolo ary mitaingina soavaly miaraka amin'ny tompony. Ny Xolo dia afaka mandositra ny zava-drehetra na mihanika na inona na inona mba hahatongavanao amin'ny misy anao. Na izany aza, satria marani-tsaina izy ireo dia afaka mianatra mijanona amin'ny toerana itiavanao azy ireo koa raha mbola tsy ho mandrakizay. Amin'ny maha-karazany an-tsokosoko manana fahaiza-miaina tafavoaka velona, ​​Xolo dia tsy handefitra amin'ny fanararaotana na tontolo iainana tsy milamina. Tsy misy rà mandriaka, tsy mandehandeha ary tsy misy parasy, ny karazany tsy misy volo dia malaza amin'ny olona madio sy madio, ireo voan'ny areti-mandringana sy sohika ary amin'ireo olona mijaly amin'ny fanaintainana sy vanin-taolana karazana aretina. Tsy volo izy ireo ka mampirehitra hafanana mafana sy mampitony ary manasitrana. Izany dia satria tsy volo izy ireo, tsy manana sakana amin'ny volony, tsy mafana kokoa ny hafanan'ny vatany. Tsy karazan'olom-pifaliana na hyper ity, koa mihainoa rehefa manaitra anao ny Xolo. Aza avela ho lasibatry ny Xolo Syndrome kely alika , fitondran-tena entin'ny olombelona izay inoan'ny alika fa misy azy mpitarika kitapo ho an'ny olombelona . Izany dia hiteraka degre isan-karazany olan'ny fitondran-tena . Aza mitsabo ny alika toy ny olombelona . Mianara voajanahary kaninina ary alao araka izany ny alika, fa aza manadino ny zava-dehibe indrindra fitsangatsanganana entana isan'andro . Homena valisoa imbetsaka ianao amin'ny alika tsy miovaova.
Ny Xolo dia misy karazany telo, ny habe marina dia tsy mitovy amin'ny klioban'ny karazany ka hatramin'ny klioba miteraka, na izany aza amin'ny ankapobeny dia toy izao ny habeny.
Zavatra mpiandry ondry min Pin Mix
Kilalao: Haavo 9 - 14 santimetatra (23 - 36 cm) lava eo amin'ny soroka.
Kilalao: Lanja 5 - 15 pounds (2.3 - 6.8 kg) Any Etazonia dia antsoina hoe Toy ny Xolo kely indrindra ary any Mexico kosa dia antsoina hoe Miniature izay mety hampikorontana.
Miniature: haavo 15 - 20 santimetatra (38 - 51 cm) ny haavony eo amin'ny soroka.
Miniature: lanja 15 - 30 pounds (6.8 - 14 kg) Any Etazonia dia antsoina hoe Miniature ny Miniature ary any Mexico kosa dia antsoina hoe Intermière.
asehoy ahy ny sarin'ny chihuahua
Standard: Haavo 20 - 30 santimetatra (51 - 76 cm) ny haavony eo amin'ny soroka.
Fenitra: lanja 25 - 40 kilao (11 - 18 kg) ary hatramin'ny 60 + pounds (27 kg)
Ny Xolo dia karazany mafy sy mahasalama tsy manana ahiahy ara-pahasalamana mifandraika amin'ny karazany. Ny mpiompy ambony iray dia hitazona an'io fomba io amin'ny alàlan'ny fambolena ireo specimen izay manana ireo toetra ara-pahasalamana, hoditra tsara, toetra ary fampifanarahana. Ny mpamboly iray izay miteraka vola fa tsy ny fahasalamana sy ny fiadanan'ilay zana-ketsa dia mety tsy dia miahiahy amin'ireo toetra ara-pahasalamana ireo, fa izay ananana am-pelatanany ihany no ampiakariny fa tsy izay tokony ananan'izy ireo. Andraikitry ny mpiambina tena manokan-tena ny fiompiana. Fantatsika rehetra ny nanjo ny maro amin'ireo karazany malaza be taloha, ka noho izany isika rehetra dia mahalala tsara kokoa noho ny mamboly ho an'ny tanjona hafa ankoatry ny fahasalamana sy ny fiahiam-bahoaka an'ity karazany tena tsy fahita sy mahatalanjona ity. Ny fahasalaman'ny hoditra dia tena zava-dehibe amin'ny karazany tsy misy volon'ondry amin'ny toetr'andro mangatsiaka be. Na eo aza ny zavatra novakin'ny maro tamin'ny Internet, dia mafy be ny hoditry ny Xolo ary tsy mila fitandremana firy izy. Raha ny marina ny fandroana tafahoatra dia mety manala ny hoditry ny fiarovana voajanahary, ka miteraka fahavoazana bebe kokoa noho ny tsara. Ny fanosotra menaka be loatra sy ny fizahana masoandro koa dia mety hanentsina ny mason-koditra sy hanimba ny hoditra, miteraka mony ary ny toy izany. Ka mandro sy menaka fanosotra na fanamasoandro fotsiny araka izay ilaina. Avelao ny fiarovana voajanahary ny Xolo hanao ny asany. Xolos miloko mainty sy miloko mainty no manana hoditra matevina indrindra ary ny maivana dia mitaky fikarakarana bebe kokoa: Jereo ny fikolokoloana.
poodle sy bichon frize Mix
Ny tanora Xolos dia mitaky fanatanjahan-tena, fifehezana ary fiheverana be, kilalao sy zavatra maro hatao mba hitazomana azy ireo ho faly sy tsy hisy olana. Raha tsy manam-potoana ilaina amin'ny taona voalohany ianao dia azonao atao ny mieritreritra mpampiofana, mpandeha alika, na fikolokoloana alika mandritra ny andro iasanao. Na Xolo zokiny. Rehefa mihalehibe izy ireo dia milamina ary mora mandeha tokoa, mangina ary milamina, ary afa-po mijanona ao an-trano rehefa miasa. Na izany aza, aleon'izy ireo hiaraka aminao raha afaka izy ireo ary afaka miasa tsara miaraka aminao. Tsy midika izany fa tsy lalao ho an'ny jogging, fitsangatsangana na hetsika hafa izy ireo, midika fotsiny izany fa tsy mitaky be loatra, hoy izy ireo, karazana miasa na karazan'olona terrier.
Ny Xolo kely kokoa dia nompiana ho namana ary Xolo lehibe kokoa ho fiarovana. Na inona na inona Xolo nofidianao dia mila raisina a mandeha isan'andro . Na dia afaka mikarakara be dia be ny zavatra ilain'ny Xolo fampihetseham-batana aza ny lalao, toy ny karazana rehetra, dia tsy hanatanteraka ny toetrany voalohany handehanana izany. Ny alika tsy mahazo mandeha an-tongotra isan'andro dia toa mampiseho olana amin'ny fitondran-tena. Ity karazana ity dia mafy be ary mampifanaraka ny fomba fiainany maro, satria tonga amin'ny habe maro isaky ny ilaina izany. Ny karazana rehetra tsy misy volo dia tsy maintsy arovana amin'ny hatsiaka sy ny hafanana mahery tahaka ny tenanao, na aiza na aiza misy olona Xolos, afaka manome azy ireo hipetraka ao an-trano miaraka aminao. Izy ireo dia manao alika kennel tena mahantra na biby fiompy any ivelany any ivelany, satria mila tafiditra ao amin'ny fianakaviana izy ireo. Mampiofana tsara tokoa izy ireo ary aleony toerana mangina mahafinaritra hiantsoana ny azy ireo mandritra ny ora vitsivitsy amin'ny andro na amin'ny alina raha tsy miara-matory aminao toa ny ankamaroan'ny olona izy ireo. Maro ny tompona fiaran-dalamby na boatina fako mampiofana ny habe Xolo kely kokoa, noho izany dia tsy mila mivoaka amin'ny toetr'andro mangatsiaka be. Na izany aza, rehefa tsara ny andro, dia tsy misy olona tia ny eny ivelany toy ny Xolo tian'izy ireo ny mandro sy milentika rehefa mafana ny andro.
Ny Xolo dia karazany salama lava. Manodidina ny 15 ka hatramin'ny 20 taona no tena fahita.
Ankizy 3 ka hatramin'ny 7 eo ho eo, 5 eo ho eo
Ny karazany mifono sy ny karazany Xolo dia tsy mora volo ary karakaraina. Ho an'ny tsy misy volo: ny ankamaroan'ny olan'ny hoditra dia mipoitra avy amin'ny fiterahana tsy mahomby, tsy firaharahiana na fandroana be loatra ary fanosotra be loatra, fanesorana ireo fiarovana voajanahary sy ny mason-koditra manentsina. Xolo tsara volo tsara volo dia hanana hoditra marevaka sy malefaka nefa mafy. Mandroa sy manosotra indray mandeha na indroa isam-bolana, na raha ilaina fotsiny. Masoandro main'ny masoandro araka izay ilainao tahaka ny tenanao amin'ny toetr'andro tena milay. Tsy mamporisika vokatra iray taonina izahay hitazomana ny hoditra ho tsara, satria mety hamaky amin'ny Internet ianao anio. Tsy tokony ho lafo ny vokatra. Nilaza ny tompona iray fa mividy ny vokatra fandroana sy lotion an'ny Xolo ao amin'ny magazay dolara izy amin'ny fahombiazana lehibe. Ireo mpiompy ambony dia manome soso-kevitra momba ny vokatra malemy fanahy hypoallergenic, fandroana mahafinaritra, crème exfoliate, losion ary sunscreen. Ataovy tsotra izany. Vokatra ankafiziny dia: ny fandroana zaza sy fanosotra an'i Johnson miaraka amin'ny chamomile sy lavender. Mampitony sy mampitony ny hoditra ary mamofona be. Ho an'ny ririnina sy tendrony maina amin'ny ririnina: kitapo balsama na dibera. Ho an'ny mony na mony tsindraindray, indrindra amin'ny Xolos amin'ny zatovo ary hitazomana ny hoditra ho malefaka ary hanala ny hoditra maty hanangana: St. Ives exfoliating scrub na vokatra mitovy amin'izany. Manaova fofona amin'ny buff puff ary mandro ilaina, avy eo menaka manitra miaraka amin'ny vokatra maivana hypoallergenic. Misy losion-tsakafo mahafinaritra misy sunscreen ao anatiny. Na ny tena tianao dia Bullfrog ho an'ny zazakely. Ny olona miseho na raha mikasa ny hivoahana ianao ary maniry ny hisehoan'ny endrika tsara indrindra ny Xolo-nao: tsara ny menaka almond, ny Palmers spray amin'ny menaka dia tsara ho an'ny hoditra mamiratra ary manitra koa! Mandro foana rehefa avy mivoaka isan'andro amin'ny fampisehoana na zaridaina mba hanesorana ireo mikraoba tsy ilaina sy / na fananganana loto sy menaka. Eo anelanelan'ny fandroana ao an-trano, ny fanasana rano mafana no tsara manasa ny tarehy sy tongotra maloto amin'ny rano mafana sy ny lamba fanasana. Ho an'ny mifono: mandro ny alika mifono toy ny fanaonao mifono karazana, borosy isan'andro na farafahakeliny isan-kerinandro mba handraraka hatrany amin'ny bay. Ho an'ny karazany roa: kitiho ny rantsan-tongony sy nify borosy isan-kerinandro. Na dia tsy mirehitra aza ny loko matevina maizina, dia fahendrena ny manaron-tarehy ny karazana volon'ondry tsy misy volo toa antsika amin'ny toetr'andro mafana. Afaka sy mahavita ny marika fotsy sy fotsy sunburn raha tsy voaaro. Ny karazany tsy misy volon-doha dia mety indrindra amin'ireo marary allergy satria tsy misy volo hilatsaka. Ny karazany mihosotra, miaraka amin'ny fanosotra matetika, dia kely no mandatsaka.
alika malamute sy amboadia amboadia mifangaro
Ny Xoloitzcuintli, izay soratana koa Xoloitzcuintle, dia fantatra amin'ny anarana hoe the Mexico Hairless na Xolo. Mitovy amin'ny Manchester Terrier matanjaka. Ny Xolo dia iray amin'ireo karazan-jaza tranainy indrindra sy tsy dia fahita manerantany, nanomboka tamin'ny 3 000 taona mahery. Hita tao amin'ny fasan'ny Colima, Maya ary Aztec Indiana ny artifacta sy ny tanimanga tanimanga tamin'ity karazany taloha ity. Tena sarobidy izy ireo noho ny tsy fivadihana, ny faharanitan-tsaina, ny hery manasitrana ary ny mystika. Ny Xolo ankehitriny dia mijanona ho tsy miova. Ny razamben'ny Indiana Aztec dia nitondra alika tsy misy volo antsoina hoe 'Biche' (midika hoe mitanjaka) rehefa tonga tany Mexico avy any Azia izy ireo. Ankafizin'ny Aztec ny alika tsy misy volo toy ny biby fiompy, fa nahasoa azy ireo ihany koa ho toy ny fanafanana fandriana, sakafo ary sorona. Ny hafanan'ny vatana mafana mamirifiry alika tsy misy volo dia nahatonga azy ireo hangataka azy ireo ho toy ny tavoahangin-drano mafana taloha, manala ny fanaintainan'ny vavony sy ny tonon-taolana, na amin'ny fandriana mafana fotsiny mandritra ny alina mangatsiaka. Ny hatsiaka mahery natao ho an'ny 'Alin'ny Alika telo.' Nihalehibe ny toetran'ny palliative ny karazany mandra-pahatongan'ny 'heriny fanasitranana' ho fanasitranana rehetra. Ny tanimanga sy ny sisa tavela amin'ireto alika ireto dia nanomboka tamin'ny 300 ka hatramin'ny 900 taorian'i J.K., dia hita tao amin'ny toerana fandevenana, izay nitarihan'ny alika ny fanahy ho any aorian'ny fiainana mahafinaritra ary nanome sakafo mandra-pahatongany. Teratany Meksika ny Xolo ary miely manerana an'i Amerika atsimo. Ny alika taloha dia Xoloti. Tamin'ny faran'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo dia lasa alika mpiara-miasa tanteraka izy io. Ny hafanana avy amin'ireo alika ireo dia mbola ankafizina ankehitriny, indrindra ireo be taona. Tsy ao anaty intsony ny Xolo atahorana ho lany tamingana ary tsy atahorana noho ny tsy fahampian'ny fahalianana. Ny Xolo androany dia ekena amin'ny fitomboan'ny fahalianany amin'ny fiarahamiasa, ny tsy fivadihana, ny fahadiovana ary ny fahafaha-manao amin'izany rehetra izany! Izy ireo dia manao namana tsara, fampisehoana, hakingana, fankatoavana, fitsaboana ary alika mpanompo.
Fenitra: FCI, NKC, CKC, APRI, DRA, NAPR, ACA
Ny Xoloitzcuintle, Standard ary Miniature dia neken'ny AKC hatramin'ny 1959, raha ny tsy fisian'ny fisoratana anarana sy ny fampisehoana fampisehoana no nahatonga azy io nilatsaka. Hatramin'ny taona 2005, AKC dia nanaiky ny fitomboan'ny lazan'ny karazany taloha ary nanaiky azy hiverina amin'ny fisoratana anarana ao amin'ny AKC. Amin'ny volana Janoary 2007, ity karazana ity dia afaka mifaninana amin'ny fankatoavana AKC, hakingana, fitsapana alika, fanarahan-dia, olom-pirenena vanona K-9 ary tsy ho ela dia hanantena fifanarahana.
Kotlan'i Blancho (AKA Relic) ny Xoloitzcuintli amin'ny faha-6 volana— 'Ity no zanako lahy, Relic! Mitombo ho lasa ham! Fantany mazava tsara hoe amin'ny ora firy no tokony hihinanany ary raha tara ianao dia hikodiadia MANARAKA ANAO REHETRA mandra-pahavelomanao azy! Nahazo diplaoma fanofanana an-jaza izy ary ao anatin'ny 'fomba tanora' hianatra miarahaba olona nefa tsy mitsambikina! Mijanona be dia be izy ary tsy dia mampiavaka ny karazany! '
Koteran'i Blancho (AKA Relic) ny Xoloitzcuintli amin'ny faha-6 volana
Xochitl the Xoloitzcuintle toy ny alika kely— 'Xochitl dia alika kely mafana sy liana. Ny tiako holazaina dia, hoditra tena mafana tokoa ary te hianatra ny zava-drehetra. Nentiny tany fanofanana an-trano SY mandeha amin'ny tadiny tsy misy fiezahana kely fotsiny avy aminay. Fantany rehefa mieritreritra azy isika. Fantany rehefa mila mieritreritra momba antsika izy. Antsoinay hoe 'vahiny' izy satria tsy hoe miavaka amin'ny vahoaka fotsiny izy fa tsy mitovy amin'ny olon-drehetra ao amin'ny vahoaka. Manana hery tsy manam-paharoa izy, toa izany. Nanampy ahy tamin'ny tranga tsy fahitan-tory izy. Fantatro fa nampiasa ireo alika ireo ny Aztecs ary antony iray manasitrana amin'ny tsy fahitan-tory. Ny hafanan'ny hodiny dia manampy amin'ny fampihenana ny fanaintainan'ny aretin-kozatra izay mandady indraindray. Mbola tanora loatra izy ary mahafinaritra ny mieritreritra ireo taona ho avy. Amin'izao fotoana izao, feno fifaliana tokoa izahay ary manana traikefa mahatalanjona miara-lehibe aminy. Avelany hikarakara azy izahay fa tsy midika izany fa mankafy ny rano izy ..... (Niampita ny rantsan-tànana). '
Jack Russell / boalavo terrier Mix
Xochitl ny Xoloitzcuintle ho alika kely
'Mandrake tsy mitsaha-mitombo ary lasa tanora mahafatifaty Xolo miakanjo izy ankehitriny. Betsaka ny zavatra nianarany. Na izany aza, sahirana amin'ny fampianarana azy aho ho tonga amin'ny antsoko, indrindra rehefa mankany amin'ny valan-javaboary izahay ary variana amin'ny alika hafa izy. Matetika aho no tsy maintsy manenjika azy mandra-pandriko azy sy hametrahako azy hitarika azy mody. (Matetika izy no mieritreritra fa milalao aho), ity karazana fanahiana ity amiko, indrindra noho ny loza ateraky ny fiara mandalo. 5 volana izy ao amin'ireto sary ireto. '
Madeena the Xolo mifono lamba, sary natolotr'i Camino Xoloitzcuintle
Ampidiro ny Xoloitzcuintli amin'ny 1 1/2 taona— 'Ity faran'ny herinandro ity dia nahazo ny amboara Tompondakan'ny Tompondakan'i AKC i Relic (Kothoga an'i Ch. Blancho)! Nahagaga tokoa ny fahamatorany, tena henjana ny dingana maha-zatovo azy, nandalo fotoan-tsarotra iray izy manjaka sehatra ary izy izao dia mivoaka amin'ny ilany hafa aorian'ny asa be, toy ny bandy mahay mandanjalanja sy mangatsiaka be! Nilaza izy ireo fa nofinofy tamin'ny alàlan'ny fahatanorana io karazany io, saingy tiako ny HANOHANA izay olona manana Xolo tanora (na alika tanora mafy loha), AZA miala! Ny alika adolantsento no taona fahita indrindra ilaozana any amin'ny toeram-pialofana sy famonjena satria mety ho mafy tokoa izany, manosika anao izy ireo ary toa manadino izay zavatra nianarany rehetra, fa raha tsy miovaova hevitra ianao, mangataha fanampiana raha toa ka manjary mavesatra, ary ianao dia mandalo azy miaraka amin'ny alika mahafinaritra izay tianao bebe kokoa satria samy ianareo mifankahazo na dia mihoatra noho izay noeritreretinao ho vitanao aza!
Pupe, alika kely Xoloitzcuintli 2 volana, tanànan'i Mexico
Ity i Rico Suave, 17 lbs. an'ny doggie 'nekkid' :)
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Xoloitzcuintli
Sary Xoloitzcuintli 1
Sary Xoloitzcuintli 2
min pin black mix mix
fifangaroan'ny heeler manga collie mix size
aty miloko fisaka mifono fisaka
wolfhound irlandey alika kely afangaro alika kely
sarin'ireo pyrène fotsy tsara
amerikana eskimo alemanina mpiandry ondry mix